होम अाइसोलेसनमा बसेकि महिलाको मृत्यु |
गृह पृष्‍ठ खबर होम अाइसोलेसनमा बसेकि महिलाको मृत्यु
होम अाइसोलेसनमा बसेकि महिलाको मृत्यु
प्रकाशित मिति : २०७७ आश्विन १५ , बिहीबार १३:२४
कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि होम आइसोलेसनमा बसेकी मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका– २ कि ८४ वर्षीया वृद्धाको मृत्यु भएको छ ।
विराट मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मंगलबार कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि वृद्धा होम आइसोलेसनमै बसेकी थिइन् । उनको बिहीबार विहान मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । बुधबार राति सुनसरी इटहरीका दुई जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको थियो ।
इटहरीमा होटल व्यवसाय गर्ने इटहरी उपमहानगरपालिका–६ का ५६ वर्षीय पुरुष र लागूऔषध मुद्दामा पूर्पक्षका लागि मोरङ कारागारमा रहेका २७ वर्षीय युवकको मृत्यु भएको हो । ५६ वर्षीय पुरुषको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको १५ मिनेटमै बुधबार राति मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले जानकारी दिए ।
मृत्यु पछि कोरोना जाँच गर्दा पोजेटिभ रिपोर्ट आएको कोशी अस्पताल विराटनगरका आइसोलेसन प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण यादवले जानकारी दिए ।
पछील्लो पोस्ट दोलखामा खुलेका विद्यालय बन्द गर्ने निर्देशन
अगिल्लो पोस्ट बाबुराम, वैद्य र विप्लवसँगको विवाद मिलाएर जान सकिने प्रचण्डको भनाई